Al-Shabaab oo 60 ruux ka qafaalatay gobolka Baay | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo 60 ruux ka qafaalatay gobolka Baay
Al-shabaab oo maamusha meel badan oo Koofurta Soomaaliya kamid ah ayaa dadka shacabka ah markii ay diidaan dalabkeeda ugu hanjabta dil ama ganaax.
BAYDHABO, Soomaaliya – Wararka laga helayo tuulooyinka hoos taga magaalada Buur-hakaba ee gobolka Baay ,ayaa sheegaya in rag katirsan Al-Shabaab ay halkaas maalinimadii Isniinta aheyd ka qafaasheen ku dhawaad 60 ruux oo dadka deegaanka kamid ahaa.
Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in ay dadkaan la aadey dhinaca deegaanka Iidaale, oo katirsan isla gobolka Baay, waxaana lagu soo waramayaa in dadka la qafaashay ay u badnaayeen Odayaal iyo Haween si aad ah looga yaqaanay deegaanka.
Al-shabaab ayaa maalmo kahor amar ku soo rogtay Warbiyood ku taallo tuulada Lahoware oo ku taalla gobolka Baay, iyadoo go’aamisay in qof kasto ee Biyo ka cabaya uu lacag bixiyo, taas oo kacdoon shacab dhalisay.
Dhalinayro iskood isku abaabulay oo arintaan ka dhiidhinaya ayaa la sheegayaa in ay Al-shabaab weerar kala hor tageen, waxaana lagu soo waramayaa inuu dagaal xooggan dhex maray labada dhinac, wallow aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay.
Qafaalashada ay sameysay Al-shabaab ayaa lala xiriirinayaa arintaan, waxaana xusid mudan in maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda Soomaaliya labaduba ilaa haatan aysan ka hadlin falkaan af-duubka ah ee loo geystay shacabka Buur-hakaba.
Al-Shabaab ayaa ku xooggan deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool ee Koofur Galbeed Soomaaliya, waxaana mararka qaar dhacda in ay amar diido iyo iska-cabin kala kulmaan dadka deegaanka ay caburinta ku hayaan.
Comments Topics: al shabaab gobolka baay koonfur galbeed
News 22 July 2020 11:04